Yusuf Garaad: Aniguba Harqaan ayaan ku Billaabay
Dhallinyaro reer Boosaaso ah ayaan Barta Internetka ee BBC ka akhriyay in lagu tababbarayo xirfado dhowr ah sida tolidda harqaanka ama dawaarka, soo dhoweynta iyo farsamada korontada.
Ra'yigan waxaa la yimid dhallinyaro si ay uga baaqsadaan tahriib iyo khataro kale.
Waan ku farxay waana ku dhiirri gelinayaa dhallinyaradu in ay xirfado kala duwan bartaan.
Waxaan la wadaagayaa in lacagtii iigu horreysay ee aan shaqeystay aan ka soo saaray harqaan ka dib markii aan dhammaystay waxbarashada Dugsiga Hoose Dhexe ee Maxamuud Xarbi.
Xilligaas waxay ahayd nidaam ardaygii fursad u helaa uu galabtii, habeenkii ama fasaxyada Iskuulka uu lacag ka sameeyo dawaarka, ku muujiyo in uu lacag shaqeysan karo, iskuna soo saaro in uu qaban karo wax wehliya waxbarashada. Waxaa kale oo ay ahayd shaqo lagu sameysto saaxiibbo hor leh oo aan ahayn kuwa xaafadda iyo kuwa iskuulka oo ayagu badanaa is wada yaqaan. Waxay ahayd oo kale meel saaxiibka loogu axsaan fali karo.
Dakhligii iga soo galay harqaanku wuxuu iga daboolay kharashkii aan billowgii ku bixiyay Dugsiga Barashada wadidda baabuurta.
Dhallinyarada in fursado waxbarasho, kuwo shaqo iyo tartammo isugu jira waxbarasho, madaddaalo iyo maaweelo loo helo waxay wax ka tari kartaa amniga iyo xasilloonida dalka iyo kororka tirada dadka Soomaaliyeed.
Dhallinyarada uu tababbarku u furmay waxaan xusuusinayaa in ay muhiim tahay in xirfadda ay hadda baraneyaan ay ka dhigtaan buundo ay ugu tallaabsadaan mid kale oo ka wanaagsan kana dakhli badan oo u sii dhoweysa bartilmaameedka ay noloshooda ka damacsan yihiin.
Sida taas lagu gaari karana waxaa ka mid ah in aad ku qanacsan tahay hadba howsha aad markaa gacanta ku hayso, sida ugu wanaagsanna aad u qabato, mar walbana aad Allah u wakiilato in uu kaa hor istaago waxa aan kuu rooneyn.
Posted by Yusuf Garaad at 08:28:00